Ciyaaraha Fudud ee Dugsiga Sare ee Minnetonka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Diiwaangelinta Hawlaha Gu'ga ayaa furmaya Isniinta, Febraayo 22!
Isdiiwaangeli 1976a.cf.wordwareinc.com . Fadlan hubso inaad haysato muuqaal jir ahaan hadda ku jira faylka. Jimicsiga jirka wuu fiicanyahay 3 sano laga bilaabo taariikhda imtixaanka. Haddii aadan hubin haddii aad leedahay muuqaal jireed oo hadda ku jira faylka, ka hubi Jane.McGowan@minnetonkaschools.org .
Cusbooneysiinta Isboortiga Guga ee MSHSL ayaa dhow dhow!
Cusboonaysiinta Waxqabadyada Jiilaalka Dugsiga Sare (1/16/2020)
OGOLAASHAHA SPECTATORSHIP EE SPORT
Kubbadda Koleyga - Wiilasha iyo Gabdhaha: Varsity, JV, B kooxaha - guriga ama martida 2 (laba) daawade ciyaaryahan kasta; Kooxaha Freshman - guriga: 2 (laba) daawade ciyaaryahan kasta; maqan: daawadayaal malaha (Shirka Lake)
Lagdamaaga: 1 (hal) daawade ciyaaryahan kasta
Xeegada - Wiilasha & Gabdhaha, Varsity iyo JV: 2 (labo) daawade ciyaaryahan kasta
Qoob-ka-ciyaarka Tartanka - Varsity iyo JV: Caadi ahaan 2 (laba) daawadeyaal ciyaartoy kasta (iyadoo ku xidhan cabbirka jimicsiga)
Wiilasha Dabaasha iyo Quusitaanka: Ma jiraan daawadayaal
Jimicsiga: Maya daawadayaal
Skiing Alpine: Daawadeyaal malaha
Barafka Nordic: Waxay kuxirantahay goobta (la tasho tababaraha)
Minnetonka iyo dhammaan iskuulada Lake Conference waxay isticmaalaan Vanco, oo ah barxad tikidhada internetka laga helo. Macluumaadka tigidhada si toos ah loogula socodsiiyo qoysaska kaqeybgalaya Agaasimaha Hawlaha.
Tigidhadaada ku iibso khadka tooska ah.
Tus tigidhka emaylkaaga iyo lambarka QR taleefankaaga ama nuqul daabacan.
Xullo Ciyaaraha Aan Shirka Aheyn waxay u baahan karaan diiwaangelinta kuwa ka qeyb galaya iyo tikidhada goobta kaash kaash ah.
Imaanshaha dhammaan cayaaraha waa in la qoraa si loo waafajiyo tilmaamaha qandaraas raadinta.
Tikidhada lagama heli karo dadweynaha guud.
TILMAANTA KA QAYB GALKA
Daboolka wajiga waa in la xidho markasta.
Dhammaan goobaha isboortiga waxay isticmaali doonaan "dhibic" fadhiga nidaamka.
- Dhibcaha waxaa la saarayaa 6 fuudh oo u kala saaran nuujiyaha, kuraasta, iwm.
- Hal dhibic wuxuu matalaa laba qaybood / xubno qoys.
- Waxaad fadhiisan kartaa ama istaagi kartaa oo keliya halka dhibcuhu tilmaamayaan 6 fuudh oo kala-goys ah.
Iyada oo lagu dadaalayo in la kala saaro bulshooyinka, HOME iyo kooxda martida ee fadhiga waxaa loo qoondeyn doonaa calaamado. Daawadeyaashu waa inay fariistaan oo keliya qaybta loo xilsaaray.
Daawadeyaashu waa inay ku dhaqmaan kala fogaynta bulshada ee 6 cagood markasta.
Daawadeyaashu waa inay ku hayaan ugu yaraan 12 fiid dusha sare ee ciyaarta iyo kuraasta kooxda.
Daawadeyaashu waa inay ka baxaan dhacdada isla markaaba dhacdada kadib. Ma booqan kartid kaqeybgalayaasha. Qoysasku waa inay ka baxaan dhismaha oo ay ku kulmaan banaanka.
Lama ogola kuwa sameeya buuqa ama calaamadaha.
Daawadeyaashu waxay kaliya uga tagi karaan burushka inay isticmaalaan musqulaha.
Albaabada waxaa lagu calaamadin doonaa "GELI" iyo "KA bax." Fadlan isticmaal albaabka ku habboon.
Daawadeyaasha ayaa imaan kara wax aan ka badneyn 10 daqiiqo kahor dhacdada waana inay isla markaaba baxaan iyagoo daba socda. Looma dili karo kahor ama kadib ciyaarta looma ogolaan doono gudaha dhismaha.
Hubinta heerkulka ayaa dhici doonta marka la yimaado. Nadiifiyaha gacmaha ayaa sidoo kale la heli doonaa.
Dhammaan daawadayaashu waxay ku celceliyaan is-baarista kahor intaysan imaan. Haddii aad astaamo leedahay ama aad u malaynayso in lagaa helay, fadlan guriga joog.
XOGTA WARBAAHINTA SARE
Dhammaan xiriiriyeyaasha qulqulka ciyaarta guriga iyo bannaanka waxaa loo dhajin doonaa sida ay u heli karaan kalandarka waxqabadyada lakeconference.org . Fadlan dulqaad u yeelo mawduucan isbeddelaya.
Kubbadda Koleyga - Wiilasha iyo Gabdhaha - V / JV / B: Shabakada NFHS (lacag); Freshman: Youtube - Kanaalka Waxqabadka Skippers (link to come)
Xeegada: https://www.mnhockey.tv/minnetonka (lacag)
Legdinta: YouTube Skippers Hawlaha Channel - link in ay yimaadaan
Qoob-ka-ciyaarka Tartanka: Inta badan shabakadda NFHS (lacag)
Wiilasha Dabaasha iyo Quusitaanka: Minnetonka Aquatics YouTube channel
Astaamaha iyo Is-Hubinta - Kahor intaadan ardayda u dirin tababar / ciyaaro, fadlan is-baar. Haddii aadan fiicneyn, fadlan guriga joog oo si dhaqso leh ugu wargeli tababaraha. Tababarayaashu waxay u sheegi doonaan Mr. Schultz, wuxuuna la shaqeyn doonaa kalkaaliyaha caafimaadka ee dugsiga si uu ula socdo calaamadahaaga. Xusuusin ku saabsan astaamaha caadiga ah ee COVID-19 ayaa laga heli karaa https: //www.health.state.mn.us/diseases/coronaviru ...
MSHSL COVID-19 Ku noqo borotokoolka kaqeybgalka - Qoysaska waxaa lagu dhiirigelinayaa inay dib u eegaan https: //drive.google.com/file/d/1enVNYNTJpcil2YWhg ...
Daboolida wajiga - Daboolida wajiga waa inay xirtaan dhamaan dadka markasta. Tan waxaa ka mid ah ku dhaqanka iyo ciyaaraha labadaba, marka laga reebo in yar oo keliya marka laga reebo. Ka qaadida wejiga daboolida inta lagu jiro howlaha ku lug leh jimicsi heer sare ah lama ogola. Waxa ka reeban sharciga wejiga daboolaya wejiga waxaa ka mid ah:
Jimicsiga iyo Farxadda: Ardayda-ciyaartooydu waxay si ku-meel-gaadh ah u siibi karaan maradooda wejiga daboolaya inta lagu jiro howlaha sida foorarsiga / istaagga / duulista ama aaladaha qaarkood si looga fogaado in aragtida wax u dhimayso, halista ah inuu ku mergo ama lagu qabto qalabka. Ciyaartooyda-ciyaartooydu waa inay xirtaan indho-shareerka dhammaan dhaqamada kale iyo wax qabadkooda joogtada ah
Dabaasha iyo Quusitaanka: Ardayda-ciyaartooydu waa inaysan xirtaan maro wejiga lagu daboolo inta ay biyaha ku jiraan.
Lagdamaaga: Ciyaartoyda-ciyaartooydu waxay iska saari karaan marada wejiga daboolan markay xiriir legdinta la leeyihiin arday kale oo orodyahan ah.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan hagista wejiga / Daboolida Wejiga ee Ururka Dugsiga Sare ee Gobolka Minnesota, booqo https: //www.mshsl.org/sites/default/files/2021-01 / ....
Xogta guud ee la xiriirta COVID-19 iyo cusbooneysiinta waxaa laga heli karaa https://www.mshsl.org/mshsl-covid-19-information .
HAWLAHA QARANKA EE DIIWAANGELINTA IYO DIIWAANGELINTA
Dugsiga Sare ee Minnetonka wuxuu sii wadi doonaa inuu bixiyo lacag celin buuxda haddii wiilkaaga / gabadhaadu aysan koox sameyn. Tani waxay khuseysaa barnaamijyada fuliya tijaabooyinka. Wax lacag celin ah lama bixin doono ka dib hal usbuuc oo kaqeybgalka ardayda. Intaas waxaa sii dheer, baajinta iyo / ama joojinta ciyaarta, COVID-19 awgood, sabab uma noqon doonto in la bixiyo.
Waad ku mahadsan tahay taageeradaada joogtada ah, dulqaadka iyo dabacsanaanta. Fadlan ogsoonow inaan ka go'anahay inaan ka shaqeyno sidii aan u siin lahayn ardaydeena iyo dhammaan bulshada degmada dugsiga waayo-aragnimada ugu wanaagsan ee ugu wanaagsan duruufahan. Mar labaad, waanu ka mahadcelineynaa taageeradaada oo waxaan rajeyneynaa inaan si wadajir ah uga wada shaqeyno sidii aan dhammaan ardaydeenna u siin lahayn khibrad ammaan ah, togan, iyo waxbarasho inta lagu jiro xilliga qaboobaha ee 2021.
Ciyaaraha Fudud ee MHS Ku Laabashada Siyaasada Ka Qaybqaadashada
Siyaasadda Ciyaaraha Fudud ee MHS ee Ku Laabashada Ka Qaybqaadashada waxaa ku jira macluumaad muhiim u ah ka qaybgalayaasha iyo daawadayaasha. Ka hel https://docs.google.com/document/d/1P-TWOh7Smxr3b_wlWoyvm51DQeKLTx__riavEGwOmK4/edit?usp=sharing .
Xaqiiqooyinka Skippers Minnetonka
Minnetonka wuxuu kaalinta 9-aad ka galay iskuulada dowliga ah ee ugu wanaagsan qaranka ee loogu talagalay cayaartoyda Niche.com
Kooxaha kaftanka badiyaa waxay ku guuleysteen 67 horyaal gobol illaa 1953
80% ardayda MHS waxay kaqeybqaataan waxqabadyada manhajka
30 Ciyaartoyda Minnetonka ee ciyaartooyda ayaa saxiixay Waraaqaha Qaranka ee Ujeedada 2017-18
Lix gabdhood oo ka soo qalin jabiyay Minnetonka ayaa haatan si xirfad leh ugu ciyaaraya NHL, AHL iyo NFL.
Ma u baahan tahay tikidhada kulanka weyn?
Guji HALKAN faahfaahinta!
Soo ogow waxa ka socda DHAMMAAN Ciyaaraha Skippers .
Nagala soco Twitter @TonkaSkippers !
Siyaasadda Ciyaaraha Ciyaaraha Jiilaalka 01/15/21
Minnetonka Skippers 2021 cusbooneysiinta ciyaaraha fudud ee jiilaalka.
Ka aqri waxbadan oo ku saabsan Siyaasada Ciyaaraha Ciyaaraha Jiilaalka 01/15/21
Ma jiro qoraal la soo bandhigi karo.
Tweets by tonkaskippers